Kedu ihe eji agba agba agba Oakley? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Igwe Jawbreaker - ịchọta ihe ngwọta
Igwe Jawbreaker - ịchọta ihe ngwọta
Kedu ihe eji agba agba agba Oakley?
Na a toro ogologo na saa mbara oghere,Oakley Jawbreakerugogbe anya maka anwụ na-enye agbatị ọhụụ dị elu nke kachasị maka ịgba ịnyịnya ígwè na vasatail maka egwuregwu ọ bụla.
Ọ bụrụ n ’ị na-eche maka ịzụ enyo anya igwe na gịnị kpatara na ị gaghị e? Only na-enweta otu ụzọ anya mere nchedo dị mkpa mgbe ahụ ị nọ n'udo. Site n'enyemaka nke Oakley ndị na-akwado isiokwu a, m ga-ejegharị gị site n'ụdị ugogbe agba ịnyịnya igwe dị iche iche na atụmatụ dị iche iche ị ga-ele anya mgbe ịzụrụ ha. (Logo booms) (gravel crunch) (egwu egwu siri ike) N'ezie, Oakley bụ naanị otu n'ime ụdị ndị ọzọ na ahịa.
Mana site na ịzụta ihe a, m ga-atụle igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ọbụlagodi igwe kwụ otu ebe maka ọrụ ahụ. Dị ka ịzụta igwe kwụ otu ebe, ọ dị mkpa ka e buru ụfọdụ ihe ndị a tụlere n'uche, dịka ụdị njem ahụ na ọnọdụ ị na-agba. Nke a ga-emetụta gia na enyo anya gị.
afụ mpịakọta afia
Downhill ma ọ bụ nzọ ụkwụ nzọ ụkwụ, Southern California ma ọ bụ Yorkshire, na-ahọrọ nri ugogbe anya. Ma ọ bụ ka m kwuo iko n'ihi na n'ezie, m ga-ekwukwa banyere iko, a ga - emekwa nnukwu ihe dị iche na ho ị ga - ahụ ha. Ihe dị ukwuu gbasara ọtụtụ iko bụ na ị nwere ike gbanwee lenses iji mee ka otu iko iko mee ihe dị iche iche ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ ọnọdụ dị iche iche.
Tupu m banye na nkọwa, gịnị kpatara nke a ji bụrụ ezigbo echiche? Na-akwọ ụgbọala na iko? Oh, nwa nwoke, ị mere m ezigbo mma ♪♪ Ee, M ♪ - Anya nchedo nke unyi, anyanwụ na ụzarị ọkụ UV ya, ụmụ ahụhụ na-efe efe, ifufe na-adọpụ anya gị na ọsọ. Na-ele ngwa ngwa, ee? Ha na-enyekwa gị nchebe ma ọ bụrụ na ị daa, mana anaghị m ada (ọchị) ♪ Nwatakịrị, aga m enweta ya Right - Aka nri, ka anyị bido n’ụdị ugogbe ịgba agba dị iche na nha ha. Ika anaghị adị mma mgbe niile.
Anyị nwere iko atọ dị iche iche na Oakley. Yabụ nke a bụ jaket ụgbọ elu, nke kachasị. Tụlee nke ahụ na Jawbreaker, nke na-enweta obere obere.
Nwere ike ịhụ na mkpuchi ahụ na-agbanwe n'ezie. Ma mgbe ala, ndị a Rada EV bụ maa a bit slimmer. O doro anya na iko dị iche iche na-enye gị nchekwa PR dị iche iche pụọ na unyi na ifufe, mana ị ga-echekwa gbasara nkwekọ nke okpu agha.
Yabụ na anaghị m ahụ onwe m dị ka akara ngosi ejiji, mana ọ bụrụ na m kpu okpu ihu, enwere m ike iyi enyo anya n'ihi na m na-agbago ugwu, enduro ma ọ bụ na-eme nnukwu jumps, na iko na-enye nchebe kachasị mma site na mmiri, si unyi, kamakwa aa bit si na ida. Fọdụ ndị mmadụ na-ahọrọ enyo anya nwere okpu ihu, nke ụfọdụ na-ewere igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe adịghị mma, mana mgbe ọ na-ekpo ọkụ ọ nwere ike bụrụ ihe ezi uche dị na ya n'ihi na ikuku ikuku bụ ụzọ, ka mma karịa enyo. (Egwú egwu egwu) Inweta iko ndị dabara nke ọma na okpu agha gị ga-enyekwa aka ka okpokolo agba na ụlọ arụsị nke iko ahụ anaghị emetụ okpu agha ahụ ma ọ bụ tinye ya n'isi gị, nke nwere ike iru ala.
Yabụ na nke ahụ bụ ụdị nha na-emetụta etiti ahụ, mana ụfọdụ iko nwere ụlọ arụzigharị iji hụ na ha dabara nke ọma. Okpukpo ugogbe gị ọ na-emetụ ihu ihu okpu agha gị? Amaara m na ụfọdụ ndị nwere okpu agha nke na-anọdụ ala ntakịrị ma ọ bụrụ na ha metụ mgbe okpu agha gị na-agagharị, ọ ga-ewe iwe. yabụ enwere m ike ịhọrọ nnukwu iko dị ka jaket ụgbọ elu ndị a.
Y’oburu n’inwe ụdị nsogbu ọ bụla na enyo anya gị na okpu agha, ị nwere ike chọọ maka obere frames. Ọzọkwa na anya, ikekwe ọ bụrụ na ị nwere warara ihu, ị nwere ike chọọkwa nke pere mpe. Ndị buru ibu nwere ike ịdị ntakịrị oke.
Nke ahụ nwere ike ịbụ ọdịdị ị na-aga. (egwu siri ike) Kedu maka iko ndị eji aka n'okpuru ma ọ bụ karịa okpu agha ahụ? Eriri Ọfọn, ị nwere ike ịma iwu okporo ụzọ, ọ bụ iwu a na-edeghị ede na ha ga-ewepụ iko ha n'akụkụ ọnụ, echeghị m na anyị na-agba ịnyịnya ugwu kwesịrị, na n'eziokwu, ndị a nwere ntụsara ahụ karịa na ogwe aka ha n'okpuru eriri . Nnukwu iko, nchebe karịa, mana nke ahụ na-eme ka ikuku dị iche iche nke na-agbada n'okpuru ha dịkwa iche, yabụ nnukwu iko na-enyere aka na nke ahụ.
Echere m na nke ahụ ga-eme na igwe ịgba ọsọ, ime ihe n'eziokwu. Echere m na nkezi ọsọ dị ntakịrị elu. Anaghị eme na ọtụtụ mgbe n’elu igwe kwụ otu ebe, mana ejiri m n’aka na ọtụtụ n’ime unu ndị hụrụ nke a ga-agbago ịnyịnya ụzọ na igwe kwụ otu ebe.
Yabụ ị kwesịrị ịtụle ịzụ iko nke ị nwere ike ịme ma, yana ị nwekwara ike gbanwee lenses dị iche iche nke ga-aka mma maka ọzụzụ ọ bụla. Nke ziri ezi, ka anyị gakwuru ugogbe anya. Ya mere, ihe ndị a bụ ụcha anya m, o doro anya na ọ ka mma maka ọnọdụ anwụ na-acha.
Aga m ewere ụfọdụ n'ime ncha ahụ nwere ụbọchị anwụ na-acha ebe a na England taa echefukwala banyere nchedo UV, yabụ mee ka anya gị dị mma ma chebe ya na anyanwụ. Ihe ndị a bụ anya lenses Oakley Prizm Trail Torch na enyo ndị a. Yabụ ị nwere ike ịnụ maka teknụzụ Oakley Prizm a.
Yabụ Oakley mere nke a iji nyochaa ntụgharị dịgasị iche iche nke ìhè na-enye gị nlegharị anya na anya dị egwu n'okporo ụzọ ahụ ka ị wee nwee ike ịhụ ọdịiche dị mma n'etiti ihe dịka mgbọrọgwụ na nkume na elu ụzọ ụkwụ. Yabụ anyị nwere iko Prizm maka goofu, anyị nwere enyo ụzọ. Ndị a bụ nzọ ụkwụ, n'ihi ya, maka igwe kwụ otu ebe ugwu, ma mekwaa nsụgharị Torch nke ha. (egwu egwu egwu) nwetara ụdị abụọ dị iche iche nke anya igwe kwụ otu ebe ebe a, ụzọ Prizm.
Yabụ na aka ekpe m, ị nwere ndị Jawbreakers nwere nke sitere na mbụ, ha dị ntakịrị. N'aka aka nri m nwere jaket ụgbọ elu na Trail Torch, nke ọhụụ. Hụ ntakịrị nkedo na-acha uhie uhie n'ebe ahụ.
iji igwe kwụ otu ebe
Oakley mere ka ndị a dịtụ mma karị, ntakịrị belata, n'ihi ya, ha na-arụ ọrụ nke ọma n'okpuru osisi ndị dị ka anyị nwere ebe a na n'èzí na ìhè anyanwụ. Kpamkpam bara uru ịtụle inwe nnọchi anya m ma ọ bụrụ na n'oge ụfọdụ ha na-a bit kpụchara akpụcha, kamakwa nnọchi anya m maka ọnọdụ dị iche iche, ma ọ bụrụ na ị na-ebi ebe dị ka UK, ebe ọtụtụ oyi ọ bụ oke drab na ọchịchịrị Iji n'ezie eyi tinteds anya, a ezi set nke doro anya m bụ zuru ezu. Na mgbakwunye, ị nwedịrị ike ịtụle ịzụrụ otu iko maka ịnya ụgbọ ala.
Yabụ na Oakley, ị nwere ike nweta okporo ụzọ Prizm a mgbe ọ dị mfe ịnweta ugogbe anya maka anwụ na-arụ ọrụ ma igwe kwụ otu ebe na ụzọ. Ga-ahụ na-aga nke ọma dị ka ịtụle aerodynamics nke iko? Agaghị m, mana Oakley na-eme, ị nwere ike ịchọrọ, ọ bụrụ na ịmee, m bụ ezigbo ụkwara (ụkwara) nerder biker, ma ọ bụ karịa nke kaboodu roadie. (Joy electronic music) Laa azụ nha iko, obere iko dị ka Radar EV a na-enye ikuku ikuku ka mma, yabụ enwere ike ịka mma na ọnọdụ ọkụ, kamakwa mgbe ihe na-eme mmiri ma nwayọ nwayọ na vepo dị egwu malitere.
Glassesfọdụ iko ndị ọzọ na-enye ụzọ dị iche iche iji mee nke a. E nwere ọtụtụ ụzọ ndị nrụpụta si arụ ọrụ mgbochi ha, site na mkpuchi dị iche iche na anya m wee rụpụta atụmatụ ndị dị na Jawbreaker, ị ga-ahụ na anya m nwere oghere na ala na elu. Na jaketị ụgbọ elu, ị nwekwara ụdị mpempe akwụkwọ a na-enweghị osisi ka uzuoku wee nwee ike ịgbapụ nke ọma ma dịkwa nfe, yana obere atụmatụ ahụ dị nkọ, ahụtụbeghị m nke ahụ mbụ.
Hụ imi ahụ laghachi azụ, megharịa iko ndị ahụ site na ihu gị iji nye gị obere ikuku. Kedu maka iko? Ekwuola m ihe ha dị mma maka ya. Downhill, enduros, ụdị nke ịnyịnya ibu ndị ọzọ dị oke njọ, kamakwa ụfọdụ n'ime otu echiche ahụ ka ekwesịrị iburu n'uche, dịka na ha dabara okpu ihu gị zuru oke? Iko, eleghị anya ị nwere ọtụtụ nhọrọ, n'ezie site na doro anya na tinted otu, dị iche iche ịnya ụgbọ ala ona dị iche iche anya m.
Ajuju m nuru na mbu bu ma enyo eji eme uzo eji agba igwe? Ọ bụ ezie na ha yiri nke ukwuu, e nwere obere obere ma dị ezigbo mkpa. Ihe ndị dị ka ụfụfụ ugogbe onyogho, o yikarịrị ka ọ ga-adị mfe iji kwado gị iji kpoo gị ọkụ. Na igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ motocross goggle, dị ka ụdị ụfọdụ nke CoolMax ụfụfụ ezubere maka ikuku iji mee ka ị dị jụụ ọ bụ naanị inye gị ikike dị iche iche na-ahụ anya karịa igwe enyo igwe.
Kedu maka iko ndị nwere okpu agha jet? Ọfọn, ụfọdụ ndị na-agba ịnyịnya na-enwe mmetụta nke nchebe ọzọ, ma eleghị anya ọ bụghị na ịgafe obodo. You'll ga-ekpo oke ọkụ, mana maka ụfọdụ njem na-enyere ndị njem aka, gịnị kpatara ya, nke a bụ nhọrọ ọzọ dị oke mma. (egwu egwu egwu) Ihe ndị ọzọ iji nyocha tupu ịzụrụ? Ọnụahịa ahụ doro anya na ọ bụ nnukwu.
Ihe dị oke ọnụ, a na-eji ihe dị elu dị elu, ọrụ ndị ọzọ, teknụzụ ka ukwuu. Obere ego, obere ihe ya. Ọzọkwa, chee echiche banyere ezi nchebe ha na-enye.
igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe
Beenlelewo anya m ndị a, ha adịla mma iyi? Kedu maka ọnụọgụ nke anya m dị iche iche ị nwere ike iji? Nweta mgbanwe maka iko ndị a, kamakwa maka nhọrọ dịka iko ndị toro eto, iko ndị doro anya, ọnọdụ ịkwọ ụgbọala dị iche iche? Kedu maka ihe dabara adaba? Glassesfọdụ iko na-enye ihe dị iche iche, dịka Asia Fit. Ọzọkwa ndozi nke ogologo ụlọ nsọ na ihe ndị a Ka emechara, gịnị ka ị ga-enweta na ugogbe anya gị? Get nweta ọmarịcha obere ihe siri ike iji mee ka ugegbe gị dị mma na akpa nke na-eme ka oghere lens? N'ihi na enyo anya gị nwere ike mebie karịa na akpa gị karịa na ụzọ. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ole na ole sitere na Oakley na GMBN mgbe ahụ maka GMBN zutere Greg Minnaar, onye ọkwọ ụgbọala na-akwado ụlọ ọrụ, anọnyerela anyị ọtụtụ afọ.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ njem nlegharị anya, Si Richardson na-akpọrọ gị ebe a, ebe nzuzu dị na ndịda California, pịa ebe ahụ. Nye edemede ahụ isi mkpịsị aka wee pịa bọtịnụ Idenye aha.
Ndi Oakley Jawbreaker unisex?
JAWBREAKER UNISEX- Igwe egwuregwu.
Ndi Oakley jawbreakers di nma?
Oakley's JawbreakerUgogbe anya maka uchu Prizm Road bu otutu ihe anmagburu onweụzọ abụọ maka ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ. Ihe ngwa anya doro anya na-enweghị mgbagha na Prizm tint na-eme ka ụzọ dị elu dị kanke ọmadị ka nye ndị bụ isi UV nchebe na ndò maka anya gị.Eprel 19 2017
Ndewo onye ọ bụla ihe na-eme na Zachhere na enwere m akwụkwọ ọzọ na-enweghị igbe maka unu ihe mbụ taa achọrọ m ịrịọ mgbaghara maka ndị na-ege ntị maka ịghara ịdee edemede unboxing na izu abụọ gara aga, dịka ị pụrụ ịhụ, enwere m ụfọdụ mmelite emere m gia m nwere m nwere ọkụ ka mma m nwere mgbatị ka mma m nwere igwe okwu ka mma, ihe niile dị mma ọ naghị adị m ka ihe niile ọ bụ etu m siri chọọ ya taa enwere m mmelite ole na ole emere na unboxing na taa anyị ' imeghe Oakley jaw crusher na ekwenyere m na nke a bụ Mark Cavendish Edition.If amaghị onye Mark Cavendish ọ bụ onye ọkaibe na-agba ịnyịnya ma ịmara na ọ tinyere oge na mgbalị dị ukwuu iji jide n'aka na ndị a bụ ndị kachasị mma iko maka ya ma nwee olile anya na onye ọ bụla ga-eyi ha Kedu ihe dị na ya? Enwere m ọchịchọ ịmata ihe nke a bụ otu dị ka ndị a si hụ Oakleys n'anya nke mere na nke a ga-abụ ahụmịhe ọchị Echere m na ọ dị mma ọ dị mma ahụrụ m ya n'anya ugbua ahụrụ m ya n'anya ugbua Igbe ahụ n'akụkụ have ga-edebanye iko gị ebe a Anyị nwere nke na-ewepu na itinye anya m, otu esi agbanwe lenses ndị ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ihe ọzọ ebe ahụ, anyị nwere Oakley Limited Warranty na ozi ndị ọzọ niile gbasara ya n'ọtụtụ asụsụ dị iche iche ebe a, ọ dịghị ihe anyị na-eche banyere akpa akwa ahụ n'ime okwu dị mma nke na-echebe ihe dị n'ime ya dị ka eriri carbon ọ bụghị ihe doro anya mana n'ụzọ ụfọdụ ọ dị ka ya, ee, ha na-ahụ n'ezie na ndị a lekọtara ha nke ọma, ọ dị mma, chee na nke ahụ bụ imi imi clipyeah kpọm kwem. Yabụ ọ bụrụ na inwere imi pere mpe ntakịrị, mgbe ahụ nke ahụ yiri ka ọ ga-enwe ntakịrị ntakịrị ka ị nwee ike gbanwee ya ma nwee nkasi obi zuru oke ị na-achọ ijide ya n'ọnọdụ ọ bụrụ na shei ahụ anaghị eme ezuru gị oh my gosh ka anyị were plastik anya lee nke a wow 360 anya ebe a dị oke mma eso ndị a doro anya nwere obere obere mkpọchi mkpọchi ka ị nwee ike gbanye lenses ndị ahụ na nke ahụ bụ ihe ntuziaka a na - agwa gị maka mgba ọkụ mkpọchi na-agwa.
Just nwere ebe a gbasawanyere agbasawanye ka ị pụrụ ịhụ na ọ dị omimi nke ukwuu ebe a ka ị nwere ọtụtụ ọhụụ nke mbara ala nke teknụzụ prism ebe a bụ anya m ndị ọhụrụ anyị haziri iji wepụta agba ma hụ na ị hụrụ ụdị ọ bụla nke ịhụ mgbanwe n'okporo ụzọ, dị ezigbo mma ka ị mara na nke ahụ dị mkpa mgbe ị hụrụ gị ọzọ ị na-agba ịnyịnya ígwè gị achọghị ka ị gabiga iberibe gravel ị hụghị nchebe ọ bụla ebe a n'akụkụ akụkụ ikuku ee gị enwere obere oghere ebe a na nri ebe nri ebe a, enwere ebe ahu goshm, enwere otutu oghere, ya mere? N'ebe a, ị nwere ntọala ụlọ nsọ ka ị nwee ike ịgbanwe ha dabere na okpu agha gị ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ịchọrọ ịhazigharị America ka anyị hụ ka nke ahụ si dị ezigbo mma nke ezigbo ụmụ okorobịa dị mma nke ukwuu ndị a na agba dị iche iche ma ekwenyere m na ha na-ere maka gburugburu $ 270 ka $ 300 dabere na ihe agba ị n'ezie ga-esi na ụfọdụ nke imewe atụmatụ otú ụmụ okorobịa a bụ Oakleyjaw Breakers the Mark Cavendish Edition, ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla banyere ndị a biko chere free ịhapụ ha na-aza ajụjụ n'okpuru ma ọ bụ n'okpuru ịzaghachi ngwa ngwa o kwere mee. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ihe omume a biko pịa bọtịnụ dị ka ma debanye aha ma ọ bụrụ na i nwebeghị ekele gị nke ukwuu maka ikiri ụmụ okorobịa ma nwee ọmarịcha ụbọchị, anyị ga-ahụ ebe a n'izu na-abịa na unboxing ọzọ na na
Nwere ike ịgba ọsọ na Oakley Jawbreakers?
Ugogbe anya anwụ ndị a na-ewu ewu na triathletes n'ihi na ha na-arụ ọrụ nke ọmana-agba ọsọ. Na maka ịnya ịnyịnya ibu ha mara mma. Ihe mbụ ị rịba ama bụ ihe dabara adaba na okpu agha ahụ.12bọchị 12 2021
rotor 3d crank nyocha
Ndi Oakley jawbreakers bu otu?
Họrọnha:Nha:Otu Nha£ 129.00.
Nwere ike ịgba ọsọ na Oakley Sutro?
Na obere ọsọ mgbe ị na-arị ugwu ma ọ bụna-agba ọsọ,anyịenweghị nsogbu ọ bụla na ihe nlere a. Ọ dị kaOakleykuru oke nguzozi n’etiti nchebe ikuku na iku ume naEchi sidabara.
Kedu ogologo ụlọ nsọ ahụ?
Ogologo ụlọ nsọbụ mmụba na millimeters nke 'ogwe aka' nke etiti. Ihe a anaghị agbanwe dị ka ndị ọzọ. 135mm, 140mm, 145mm, na 150mm bụ nhọrọ kachasị. Natemplekwesịrị ịgbatị ihu na ihu yana ihu gị ma dabaa na nti ntị gị.Sep 27 2020
Ndị na-agba agba agba dị mma maka ịgba ọsọ?
Ugogbe anya anwụ ndị a na-ewu ewu na triathletes n'ihi na ha na-arụ ọrụ naanịnnukwu maka ịgba ọsọ. Na maka ịnya ịnyịnya ibu ha mara mma.12.02.2021
Kedu ihe Oakley XL pụtara?
KeduNdi''XL''pụtaran'imeOakleyUgogbe anya maka anwụ? ''XL'na-egosi etiti n'ibu buru ibu. Ọ bụ ihe nkịtị makaOakleyiwebata ihe nlere wee mepụta nke ka ibu, 'XL'mbipute nke otu etiti ma na oke uzo. Ihe niileOakley''XL'ugogbe anya maka anwụ na-ebu isi.Ọnwa Ise 5, 2020
Kedu ihe dị iche na Sutro na Sutro s?
Ihe dị iche. Igodoihe dị ichenke a bụ nha. Ihe 'S'n'imeSutro S.na-ezo aka n'eziokwu na ọ dị obere karịaSutro. Kechie ma ọ bụ curvaturenkena oghere naSutro S.A na-agbadata iji dabara nke obere obere ka ị ghara idafu na mkpuchi ọ bụla n'akụkụnkeeku.Sep 15 2020
Oakley Sutro na-agba ịnyịnya ígwè?
Mgbe oleOakleyulo oruSutrona 2019, a gwara ha ka ha kwaga obodondị na-agba ịnyịnya ígwè, na-ebute ụzọ ọ bụla mgbe ọ bụla karịa arụmọrụ. Ọbụna ka dị, ha abụghị ndị nzuzu na ngalaba arụmọrụ; na onye nyocha anyi na-amuta iheSutronwere ike bụrụ ụlọ ọrụ kacha mmaagba ugogbe anya maka anwụruo taa.Mkpebi 21 2020
Enwere ike iji Oakley Jawbreaker jiri anya m ọgwụ?
Ee, ọ ga-ekwe omume! Nke a bụ Rob sitere na SportRx na-egosi anyị ihe Oakley Jawbreaker dị ka anya m na-eji ọgwụ anya ejiri Sensens Lens. Plọ ahịa Oakley Jawbreaker: https: //www.sportrx.com/oakley-jawbre All Oakley eyewear: https: //www.sportrx.com/shopby/brand -...
Kedu ka Jawbreaker si arụ ọrụ na ugogbe anya maka anwụ?
Na-atụgharị imi na pivot, slide mepee obere ihe mgbochi na mpempe akwụkwọ nke elu na nke ala wee meghee dị ka agba. Ọwa ndị na-ejide lens nwere obere ihe mgbochi roba maka maka nkiti dị jụụ ma dịkwa nchebe. Ndị Jawbreakers abụghị ihe kachasị ọkụ n'ụwa, mana na 34g ha abụghị nsogbu na ihu gị.
Kedu otu okuku nke Oakley Jawbreaker dị?
Ogologo 131mm na-ekpuchi ihu na ihu nke ukwuu, yana akụkụ ala dị ala na-eme ohere maka cheekbones gị. Ihe aka m na-eme na ihe owuwu ihe owuwu bụ otu Oakley logo si apụta n'akụkụ abụọ gị na ọhụụ gị. Enwere ahia banyere uru nke iko na-enweghị osisi na ihe dịka Jawbreaker nwere etiti zuru oke.
bmx okpukpu anọ azụ azụ